Imboni-Ethile Ultrasonic Solutions - Hielscher Ultrasound Technology
Amadivaysi ama-ultrasonic ase-Hielscher asetshenziselwa ezimbonini eziningi, njengamafutha athengiswayo & biomass, ukudla & isiphuzo, upende & inkino, ukugqoka, ucingo kanye nekhebula, noma ukucubungula amakhemikhali.
Ukukhula kwe-algae nokukhishwa
Amadivaysi ama-ultrasonic ase-Hielscher asetshenziselwa okuqhubekayo kwe-reactor reactors kuya susa i-algae ifilimu kusuka ebusweni obala. Emva kokukhula kwe-algae nokuqina, i-cavitation ye-ultrasonic isetshenziselwa i-the isizinda samafutha algae nezinye izinto eziwusizo.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasound transesterification!
I-Chemistry / Sonochemistry
I-Sonochemistry yi-application ye-ultrasound ekuphenduleni kwamakhemikhali nezinqubo. Inqubo eyenza imiphumela ye-sonochemical in oketshezi yiyona yinto ye-acoustic cavitation. Imiphumela ye-sonochemical ekuphenduleni kwamakhemikhali kanye nezinqubo kubandakanya ukukhuphuka kwejubane lokuphendula kanye / noma ukukhipha, ukusetshenziselwa kwamandla okusebenza kahle, ukuthuthukiswa kokusebenza kwezakhi zokudlulisa izigaba, ukuvuselelwa kwezinsimbi nezitshalo noma ukwandisa ekusebenzeni kabusha kwama-reagents noma ama-catalysts.
Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic asetshenziswa ku- synthesis of nanomaterials kanye naku ukubunjwa kwamakhemikhali kanye nezinhlanganisela ezinamanothi-nano. Lokhu kuhlanganisa ukusetshenziswa ultrasonics ngesikhathi sezulu kanye ne-deagglomeration yamathuluzi we-nano-size, njengezinsimbi zensimbi noma ngama-carbon nanotubes.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokusetshenziswa kwe-ultrasonics embonini ye-nanomaterials!
Ukunciphisa nokwehlisa usayizi wezingulube ku-encjet inks nokuyi-inks yokunyathelisa kuyisicelo esivamile samadivayisi we-Hielscher ultrasonic. I-cavitation ye-ultrasonic idlulisa ama-micro-size kanye nezinto zokwabiwa kwe-nano-size kuma-particle angashadile.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana nokusetshenziswa kwe-ultrasonics ekubunjweni kwama-inks!
I-Ultrasound isetshenziselwa ukwakhiwa kwamaphoyinti nokugqoka okulandelayo:
ukunciphisa usayizi Ama-nanomaterials
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana namadivayisi we-ultrasonic ekukhiqizeni amapende nokugqoka!
Ukuhlanzwa kwe-Ultrasonic kungenye indlela enemvelo yokuhlanzwa kwezinto eziqhubekayo, njenge-wire kanye nekhebula, amateyipu noma amashubhu. Umphumela we-cavitation owenziwe amandla e-ultrasonic ususa izinsalela ze-lubrication njengamafutha noma amafutha, amasobho, ama-stearates noma uthuli.
Amafutha & Amakhemikhali Egesi Nokuvuselela
Amadivaysi e-Hielscher ultrasonic asetshenziselwa izindawo zokucwaninga uphethiloli kanye nokucubungula izitshalo ze-ultrasonication yamakhemikhali amaminerali futhi avuselelwe. Lezi zicelo zifaka phakathi Ukunciphisa kwe-NOx, the ukuxoshwa kwamafutha & idizili, ukukhiqizwa kwe-biodiesel, ukuhlakazeka kwemisipha kanye nokukhiqizwa kwe-ethanol.
Chofoza lapha ukuze uthole ukuthi kungenzeka yini ukuthi ama-ultrasonics angakwazi ukuthola amakhemikhali angasetshenziselwa ukuvuselela!
Ukusetshenziswa kwe-ultrasonics embonini yokudla akukhawulelwe ku- Ukuhlakazeka kwamaseli, the ukungasebenzi kwe-enzyme futhi kuya Ukuhlakazeka futhi emulsification izithako zokudla nezithasiselo. Amadivayisi we-Hielscher ultrasonic nawo asetshenziswa ku- ukuvuza ukuvuza kwamabhodlela ama-soda namathini kanye naku i-degassing yotshwala, njenge-chocolate. I-ultrasonication iyindlela engavamile yokushisa okuvamile yokushisa okuvamile kokudla okuneziphuzo kanye neziphuzo, ezifana namasiki, uju noma ubisi.
Chofoza lapha ukuze uthole olunye ulwazi mayelana nokusetshenziswa kwe-ultrasonics embonini yokudla!
Ukwakhiwa kwemikhiqizo yezimonyo ezintsha kuhilela izinselele eziningi zokucubungula, njenge- Ukuhlakazeka kwamaseli nokuqina, noma ukuhlakazeka nokuqothula ama-powders abe ngamanzi. Ngezinqubo ezinjalo, kanye ne ukukhiqizwa kwe-emulsions ezinzile, i-degassing futhi I-homogenizing I-Hielscher inikeza imishini yokuxuba i-ultrasonic ukuze isetshenziswe kokubili, ucwaningo lwama-laboratory kanye nokukhiqizwa kwezimboni.
Chofoza lapha ukuze ufunde kabanzi mayelana ne-ultrasonication embonini yezithokozi!